Real Madrid 98, Barcelona 96 - Zidane Oo Burburiyay Boqortooyadii Barcelona Ee El Clasico - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaReal Madrid 98, Barcelona 96 – Zidane Oo Burburiyay Boqortooyadii Barcelona Ee El Clasico
Real Madrid 98, Barcelona 96 – Zidane Oo Burburiyay Boqortooyadii Barcelona Ee El Clasico
Ka dib seddex guul oo isku xigta oo kulanka El Clasico ah, Real Madrid ayaa ugu danbeyn dhanka guulaha ka hormartay Barcelona ka dib sannado badan oo ay ka danbeysay kooxda ay xafiiltamaan.
Kaliya isbuuc ka hor inta uusan Zinedine Zidane ku soo laabanin shaqada tababare ee Real Madrid, Los Blancos waxay guuldarro ka soo gaartay Barcelona horyaalka iyo Copa del Rey iyadoo uu kooxda hogaaminayay Santiago Scolari, taasoo ka dhigtay in kooxda Catalans ay badisay 96 ka mid ah 243 El Clasico oo la ciyaaray halka Real Madrid ay heysatay 95 guul.
Seddex kulan ka dib, waxay haatan isku bedeshay 98 guul oo Real Madrid iyo 96 guul oo Barcelona.
Guushii 2-1 ee ay xalay Real Madrid ku gaartay garoonkeeda ku meel gaarka ah ee Alfredo Di Stefano waxay la micno tahay in Los Blancos ay badisay labadii kulan ee horyaalka ee xilli ciyaareedkan ee Blaugrana, waana wax aysan sameynin tan iyo xilli ciyaareedkii 2007-08 markii uu macalin u ahaa Bernd Schuster.
Pepe Guardiola ayaa ka dib la wareegay shaqada Camp Nou iyadoo Barcelona ay badisay shantii kulan ee ku xigtay.
Kooxda Zidane ayaa haatan badisay seddex kulan oo isku xigta kulanka ugu weyn kubada cagta ee heer kooxeed, markii ugu danbeysay ee ay sidaan sameeyaan waxay aheyd xilli ciyaareedkii 1977-78.
Guulihii ugu badnaa ee isku xigxigay ee ay Real Madrid ka gaartay Barcelona waxay aheyd intii u dhaxeysay 1962 iyo 1965 markaasoo ay badiyeen lix kulan oo isku xigta. Barcelona rikoodhkeeda guulaha isku xigxigay ee El Clasico waxaa gaaray Guardiola waana shan kulan oo isku xigta.
Barcelona waligeed horyaal kuma guuleysanin iyadoo guuldareysatay labada kulan ee xilli ciyaareed ee El Clasico, halka Real Madrid ay horyaalka qaaday sideed jeer ka dib markii ay badisay labada kulan ee El Clasico.
Lionel Messi ayaan isagana gool ka dhalinin Real Madrid todobadii kulan ee ugu danbeysay: shan horyaalka La Liga ah iyo labo Copa del Rey. Goolkiisii ugu danbeysay wuxuu ahaa 2da bisha April 2018.